ဒေသအချို့တွင် ဖြစ်ပွားနေသော ရေကြီးရေလျှံမှုတို့ကြောင့် အဝေးပြေး ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေး လမ်းေ? - Yangon Media Group
ဒေသအချို့တွင် ဖြစ်ပွားနေသော ရေကြီးရေလျှံမှုတို့ကြောင့် အဝေးပြေး ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေး လမ်းေ?
ဒေသအချို့တွင် ဖြစ်ပွားနေသောရေကြီးရေလျှံမှုတို့ကြောင့် အဝေးပြေးကုန်စည်ပို့ ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်း ထိခိုက်မှု မရှိသော်လည်းကုန်အမှာ နည်းပါးသည့်အတွက် လုပ်ငန်းအေးစက်လျက်ရှိကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံအဝေး ပြေးကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးဝန်ဆောင် မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းမှ သိရသည်။
”မိုးဦးကာလမုန်တိုင်းတွေနဲ့ ရေကြီးတာတွေကြောင့် ကုန်စည်ပို့ ဆောင်ရေးလည်းတဖြည်းဖြည်း အေးလာတယ်။ အေးလာတယ်ဆိုတာကရေကြီးရေလျှံတာ၊ လမ်းတွေပျက်တာကြောင့် ကုန်တင်ကားတွေသွားလာလို့မရဘဲ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးပြတ်တောက်သွားလို့အေးလာတာမဟုတ်ပါဘူး။ ရေကြီးတာ ကြောင့် အဝေးပြေးကုန်တင်ကား တွေရဲ့သွားလာရေး လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကိုထိခိုက်တာမရှိဘူး။အဓိကတော့ဒေသတွေက ကုန်မှာယူတာနည်းသွားတဲ့အတွက်အေး စက်လာတာပါ။ သူတို့ဒေသတွေ မှာရေကြီးတော့ ကုန်ထားဖို့နေရာ ခက်ခဲတော့ကုန်တွေမှာယူတာနည်းလာတယ်။ ဒီလိုတွေကြောင့်ကုန် စည်ပို့ဆောင်ရေးက အေးစက်လာတာပါ”ဟု မြန်မာနိုင်ငံအဝေးပြေး ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးဝန်ဆောင် မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းဥက္ကဋ္ဌ ဦးကိုကိုနိုင်က ဇွန် ၂၁ ရက်တွင် ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ပြောသည်။
ယင်းသို့ကုန်စည်စီးဆင်းမှု နှေးကွေးခြင်းကြောင့် ကုန်စည်ပို့ ဆောင်မှုနည်းပါးလျက်ရှိသော်လည်း ကုန်စည်ပို့ဆောင်ခနှုန်းထားများမှာ အပြောင်းအလဲမရှိကြောင်း သိရသည်။ ဦးကိုကိုနိုင်က”တန်ဆာခတွေက အခုရက်ပိုင်းရေမကြီးခင်ရော ရေကြီးရေလျှံကာလအပြီး အခုအချိန်အထိ တည်ငြိမ်နေတာတွေ့ရတယ်။ အပြောင်းအလဲမရှိဘူး။ မော်လမြိုင်တန်ဆာခဆိုရင်ရေမကြီးခင်မှာလည်း တစ်တန်ကို ကျပ် ၁၈ဝဝဝ၊ ရေကြီးပြီး အချိန်အခုရက်မှာလည်း တစ်တန်ကိုကျပ် ၁၈ဝဝဝ ရှိနေပါတယ်။ အခုကအစပဲရှိသေးတယ်။ နောက်ပိုင်းလတွေမှာက ဒီထက်ပိုအေးစက်လာပြီး တန်ဆာခတွေကျလာနိုင်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုရင် နှစ်တိုင်းဝါတွင်းကာလမှာ အရောင်း အဝယ်ကအေးစက်ပြီး ကုန်စည်စီးဆင်းမှုကနှေးကွေးတတ်တယ်”ဟု ပြောသည်။
လက်ရှိရန်ကုန်မြို့မှ မြန်မာ ပြည်အနှံ့အပြားသို့ ပို့ဆောင်ပေး လျက်ရှိသော အဝေးပြေးကုန်တင်ယာဉ်များသည်အရောင်းအဝယ် အေးစက်ခြင်း၊ ကုန်စည်စီးဆင်းမှု နှေးကွေးခြင်းတို့ကြောင့် ကုန်ရရှိမှု နည်းပါးလျက်ရှိပြီး ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံမှ ကုန်တင်ယာဉ်ထွက်ရှိမှုမှာလည်းနည်းပါးလျက်ရှိသည်။ အဝေးပြေးကုန်စည်ပို့ဆောင် ရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူဦးမြင့်ကျော်က”ဒီနှစ်ရာသီဥတု အခြေအနေကြောင့်ကုန်စည်ပို့ ဆောင်ရေးကအေးစက်လာနေပြီ။ ရေကြီးရေလျှံတာလမ်းရေကျော်တာတွေဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေးတွေပြတ်တောက်တာအနည်းအကျဉ်းပဲရှိတဲ့အတွက် ပုံမှန်အတိုင်းသွားလာလို့ရတယ် လို့ပြောလို့ရတယ်။ ပုံမှန်ဇူလိုင်၊ သြဂုတ်၊ စက်တင်ဘာလတွေမှစတင် ပြီး အရောင်းအဝယ်အေးစက်တတ် ပေမယ့် ဒီနှစ်မှာတော့မုန်တိုင်းကြောင့် အခုလကတည်းက အရောင်းအဝယ်ကအေးစက်လာနေပြီ”ဟုပြောသည်။
မွန်ပြည်နယ် ရေဘေးသင့်ပြည်သူများအတွက် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ပဲခူးပြည်သူများ၏ လှူဒါန်းငွေစုစုပေါင်း ကျပ်သိန်း ၁၇၀ ကျော်နှင့် စားနပ်ရိက္ခာများ လှူဒါန်း